Tarika “Mpihira Lehibe” Alemà Iray Nanolotra Fampisehoana Ho An’i Però · Global Voices teny Malagasy
Tarika “Mpihira Lehibe” Alemà Iray Nanolotra Fampisehoana Ho An'i Però
Voadika ny 08 Desambra 2017 1:29 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny marsa 2007)
[ Fanamarihan'ny Toniandahatsoratra:niseho voalohany tao amin'ny bilaogin'ny Creative Commons Però ity lahatsoratra manaraka ity ary nadikan'i Juliana Rincón Parra ho amin'ny teny Anglisy. Efa hitantsika ihany koa ny “techno-folklorista” Ekoadaoriana tambanivohitra iray lasa olo-malaza iraisampirenena tamin'ny alalan'ny fampiasana ny YouTube sy ny bilaogy. Ankehitriny, mifandray amin'ny bilaogera manerana izao tontolo izao mba hahazoana laza sy namana ny tarika Alemà kely iray .]
Manao fitsidihana virtoaly any Lima, Però ny Röntgenschall. Amin'ny teny filamatra,” ny bilaoginao no sehatro”, mikasa ny hanatanteraka ny nofinofiny ity tarika madinika avy amin'ny tanàna kely alemà iray ity dia ny hanao fampisehoana manerana izao tontolo izao. Raha ao an-tsainy izany sy ny fihaikany ny fomba fijery fa ananan'ny olona sasany hoe mifanohitra amin'ny tombontsoany ny aterineto sy ny fandefasana hira an-tserasera dia namolavola rafitra iray izy ireo izay mandahatra ny mpankafy azy ireo. Handray fampisehoana virtoaly manokana izay natokana sy navoaka manokana ho azy ireo, ny fireneny, ary ny vondrom-piarahamonin'ny mpisera ireo bilaogy miisa dimy nahazo vato betsaka indrindra. Izany no nahatonga ny bilaogy Peroviana Txitua.org ho voafidy hanaovan'izy ireo “fampisehoana amin'ny dingana manaraka”.
Nampiasa rafi-tambajotra sosialy samihafa mba hanelezana ny mozikany ity tarika ity: Del.icio.us, biTTorrent, Jamendo, Myspace, Youtube, Hi5. Navoakany tamin'ny alàlan'ny Creative Commons atribution mihitsy aza ny hirany izay lisansa tsy ara-barotra sy natao hifampizarana tsy misy fanovana. Ireo no fitaovana Web 2.0 ary tokony hahalala izany avokoa ny mpanakanto Peroviana rehetra.
I like Röntgenschall, what can I do to help them?
Tiako i Röntgenschall, inona no azoko atao mba hanampiana azy ireo?
- Trohy, adikao, aparitaho ary ataovy remix ny mozikany.
– Fahano ny bilaogy, manaova Rakipeo na Rakipeo amin'ny Lahatsary
– Midira ho klioban'ny mpankafy azy ireo, mety ny bilaoginao no hanaovany fampisehoana manaraka
– Tsidiho ny Jamendo, manorata, omeo laharana izany ary ataovy ilay ankafizinao indrindra
– Ampidiro ao amin'ny MySpace-nao izy ireo
– Ampidiro ao amin'ny hi5-nao izy ireo
- Famoahan-gazety amin'ny teny Anglisy
– Ny bilaogin'ny tarika
– Fampisehoana ao amin'ny Txitua.org